चिट्ठाको प्रलोभनमा लाखौँ स्वाहा – Himal eNews
काठमाडौँ, १० फागुन । राजधानीको एक अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सलाई ह्वाट्सएपबाट ‘कौन बनेका करोडपति’ अफरअन्तर्गत झन्डै आधा करोड चिट्ठा परेको सूचना आउँछ । ती नर्स खुसीको ‘खबर’ भन्दै चिट्ठा परेको सूचना पाउँदा आमासँगै खुसी हुँदै फुरुङ्ग बन्छिन् । खुसीको खबर बुबासम्म पनि पुग्छ । नर्सका बुबा पनि आश्चार्य मान्दै भन्छन्, कसरी यस्तो अवसर मिल्यो ?
सुन्धारामा रेडिमेट पसल सञ्चालन गर्दै आएकी ती महिलाले पनि अनलाइन चिट्ठाको लोभमा एकै दिन पाँच लाख गुमाएको पीडा सुनाउनुभयो । अनलाइन ठगीका कारण २५ हजारभन्दा माथि १० लाखसम्म गुमाएको उजुरी बोकेर महाशाखा पुग्ने पीडितको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकम छापिएको छ ।
साताको पहिलो दिन ह्वात्तै बट्यो सुनको मूल्य
सुन तोलाको लाख नजिक, मूल्य अचाक्ली किन बढ्यो ?
बुधबार पाँच अन्तरराष्ट्रिय उडानः फर्किए ३४८ नेपाली